Mailaka @serasera.org - Serasera Malagasy
You are here: home> Mailaka @serasera.or...
Ny seraresa imailaka dia tolotra adiresy imailaka @namana.serasera.org na @serasera.org
Hamaky imailaka http://mailaka.namana.serasera.org
Rehefa mameno ny fangatahana araka ny voalaza etsy ambany ianao dia hanana adiresy solonanarana@serasera.org sy solonanarana@namana.serasera.org (boaty iray ihany) izay azonao jerena amin'ny http://mailaka.namana.serasera.org na koa amin'ny fitaovana famakiana email toa ny Outlook express sy ny Eudora sns... (Jereo eto ny fanoroana momba izay)
Ny haben'ny toerana ao amin'ny adiresy imailaka dia 7Go
Mpikambana ato amin'ny serasera nandritra ny efa-bolana (4 mois) farafahakeliny. Jereo eto hahitanao hoe oviana ianao no nisoratra anarana.
Eto ambany eto amin'ity takelaka ity ihany no ahafahanao mangataka ny hanana adiresy solonanarana@namana.serasera.org. Ny fangatahana hafa @ imailaka sns dia tsy horaisina.
Ilaina ny anarana sy fanampiny rehefa manao ny fangatahana.
Raha vao miala tsy ao anaty namana.serasera.org intsony ianao dia voafafa ny adiresy imailaka @namana.serasera.org
Raha te hanana adiresy solonanarana@namana.serasera.org na solonanarana@serasera.org ianao ka manaiky ireo fitsipika ambony ireo dia manorata ho an'i lanto na hery eto amin'ny namana miaraka amin'ny anarana sy fanampiny.
Toerana famakiana imailaka
Concept and Design © 1999 - 2020 Serasera.org: Eugene Hery
Voasokatra tao anatin'ny 0.0396 segondra